တရုတ် FPP Desulfurization ပိုက်လိုင်းပေးသွင်းသူနှင့်စက်ရုံ | Zhaofeng
၁။ ဖန်မျှင်အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ဖြန်းပိုက် fittings-FRP slurry spray ပိုက်ကိုစိုစွတ်သောဓာတ်ငွေ့ desulfurization နှင့် acid mist အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းရေးနှင့်သန့်စင်ရေးသုံးပစ္စည်းများကိုအများအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ အကွေ့အကောက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်စဉ်ကို site ပေါ်တွင်တပ်ဆင်သောအခါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုချိတ်ဆက်ရန်သုံးသည်။ လက်ရှိတွင် slurry nozzle နှင့် FRP spray ပိုက်အကြားဆက်သွယ်မှုသည်ယခင် flange connection မှ winding bonding process သို့အခြေခံအားဖြင့်ပြောင်းသွားသည်။ အကွေ့အကောက်များသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်မြင့်မားသောဆက်သွယ်မှုခွန်အား၊ ယိုစိမ့်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊ ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ အဆင်ပြေသောတည်ဆောက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းစသည့်အားသာချက်များရှိသည်။
၂။ ဖန်မျှင်မျက်နှာပြင်ဖျာ၏တိကျသောအရွယ်အစားကိုအမှန်တကယ်ဖိအားနှင့်လုံးပတ်အတိုင်းဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပလပ်စတစ်သည်အပူချဲ့မှုမြင့်မားသောကြောင့်ဆောက်လုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အောက်တွင်တိုင်းတာရန်၊ ဖြတ်ရန်၊ စုဝေးရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လိုအပ်သောဖန်ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ပစ္စည်းများ၊ အစေးအင်္ဂတေ၊ စာရွက်အစေး၊ မျက်နှာပြင်အစေးနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
၃။ FRP ဖြန်းပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း-အကွေ့အကောက်များသောအလွှာ၏အကွေ့အကောက်များသောအစိတ်အပိုင်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်ပိုက်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန်ပိုက်၏အပြင်မှမျက်နှာပြင်သည်တသမတ်တည်းဖြစ်သင့်သည်။ ထို့ပြင်ပိုက်၏အဆုံးမျက်နှာများကို corroding မပြုလုပ်စေရန်တင်းပါးအဆစ်များကိုအစေးဘိလပ်မြေနှင့်ဖြည့်ရန်လိုသည်။ လိုအပ်လျှင်လေ ၀ င်လေထွက်ခြင်းနှင့်ကွဲအက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အပြင်ဘက်ဆုံးလွှာကိုဖယောင်းသုတ်ပါ။
A. ခံနိုင်ရည်ရှိသောအလွှာ၊ ဤအစိတ်အပိုင်းသည်အကွေ့အကောက်များသောအလွှာ၏အပြင်ဘက်ဆုံးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖန်မျှင်မျက်နှာပြင်ခံစားမှု၊ အစေးနှင့် ၀ တ်ခံနိုင်သောအဖြည့်ခံတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ corrosion resistance နှင့် wear resistance ဖြစ်သည်။ ဖန်အမျှင်မျက်နှာပြင်ဖျာအလွှာ၊ အစေး
Anti-corrosion အလွှာ၊ ဤအစိတ်အပိုင်းကိုအစေးကြွယ်ဝသောအလွှာနှင့်အလယ်အလတ်အလွှာတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းကိုဖန်မျှင်မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်နှင့်အစေးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပြီးသံချေးတက်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အလွှာအောက်တွင်တည်ရှိသည်။ အစေးကြွယ်ဝသောအလွှာ၏အစေးပါဝင်မှုသည် ၉၀%ထက်ကြီးပြီးအထူမှာ ၀.၅ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။ အလယ်အလတ်အလွှာ၏အစေးပါဝင်မှုသည် ၇၀% မှ ၈၀% ရှိပြီးအထူမှာ ၂.၀ မီလီမီတာခန့်ရှိသည်။
B. အားဖြည့်အလွှာ - ဤအပိုင်းသည်ပိုက်လိုင်း၏အပြင်ဘက်နံရံတွင်တိုက်ရိုက်ဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ဖိအားနှင့်အခြားဝန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ၎င်း၏အထူကိုပုံသေနည်း (၁) အရဝန်အခြေအနေများအရတွက်ချက်သည်။ ဒီအလွှာသစ်ပင်
အဆီပါဝင်မှု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖန်မျှင်၊ ဖြတ်ထားသောဖိုင်ဘာဖျာနှင့်အစေးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။3FRP ဖြန်းပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း-အကွေ့အကောက်များသောအလွှာများကိုအကွေ့အကောက်များသောအကွေ့အကောက်များနှင့်စစ်ဆေးခြင်းပြီးစီးပြီးနောက်အကွေ့အကောက်များသောအလွှာကို HG/T20696-1999“ Glass Steel Chemical Equipment Design Regulation” တွင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ ကွဲအက်ခြင်း၊ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ လိပ်များတွင်အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ထိတွေ့ထားသောအမျှင်များ၊ ခြောက်သွေ့သောအစက်များ၊ ပါဝင်မှုများ၊ ပူဖောင်းများ၊ သေးငယ်သောအပေါက်များနှင့်သစ်စေးအကျိတ်များသည်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်။
1. လျှပ်စစ်လျှပ်ကာပါ ၀ င်သည်။ ဆေးဖြန်းပိုက်၏အပေါ်ယံကို thermosetting အစေးဖြစ်သော epoxy resin ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
၂။ ကောင်းသောတည်ငြိမ်မှု၊ ဝတ္ထုအများစုနှင့်ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုမရှိ၊ သံချေးတက်မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း။
4. ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ။ တာဝါတိုင်ရှိလေဖြန်းစနစ်သည်အတားအဆီးမရှိသောဖြန်းငွေ့ဓာတ်ငွေ့ရည်ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာကိုသုံးသည်။ ၎င်းသည်ပွတ်တံပြား၏အထက်ပိုင်းတွင်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသောဆေးဖြန်းပိုက်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ထူးခြားချက်မှာဓာတ်ငွေ့အရည်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ၃၆၀ ဒီဂရီရေကာကာနှင့်ဖုံးကွယ်ထားသောထောင့်များမရှိစေရန်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ရေဖျန်း၏အဖွင့်အဆင့်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောရေပေးမှုကိုအာမခံပေးရုံသာမကပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးရေအရည်အသွေးတင်းကြပ်မှုလိုအပ်ချက်များမရှိပေ။ ဘွိုင်လာပြာများလျှော်ခြင်း၊ slag လျှော်ရေ၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသက်ရှင်သန်စေသော alkaline စွန့်ပစ်ရေများနှင့်ပြာဆည်များမှရေများအားလုံးကို desulfurization သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန် system ကိုပြန်သုံးသည်၊ ဖြန်းရေပေးဝေရေးစက်သည်ဟောင်းနွမ်းပြီးမပိတ်ပါ၊ အလုပ်လုပ်သည်။ ထိန်းသိမ်းမှုသည်ရိုးရှင်းပါသည်။
၅။ စက်ပြင်ကောင်းတယ်။ ၎င်းသည်သံမဏိ၊ ခိုင်မာသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံတို့ကဲ့သို့တူညီသောအစွမ်းသတ္တိရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် PF အစေးနှင့်မပြည့်ဝဆီ polyester ကဲ့သို့ယေဘူယျ thermosetting resins များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၆။ ကောင်းမွန်သောအပူခုခံနိုင်မှု၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ၈၀ ～ ၂၂၀ ဖြစ်သည်။ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသော epoxy resin အမျိုးအစားများသည် ၂၀၀ ℃အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
၇။ ဆေးကြောရန်ကျုံ့နှုန်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့် ၁% မှ ၂% ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် thermosetting resins များကြားတွင် curing shrinkage rate နည်းသောမျိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ linear expansion coefficient သည်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်6× 10-5/℃ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးကြောပြီးနောက်အသံအတိုးအကျယ်အနည်းငယ်ပြောင်းသည်။
ယခင်: FRP နှစ်ထပ်အလွှာပိုက်
နောက်တစ်ခု: FRP ပိုက် fittings FRP Flange